Shina: Loka Nobel Fandriampahalemana – Liu Xiaobo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2010 22:07 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, Español, 简体中文, Nederlands, Deutsch, Italiano, 한국어, Français, English
Ora vitsivitsy izay dia nanapa-kevitra ny hanolotra ny loka Nobel Fandriampahalemana 2010 ho an'i Liu Xiaobo ny Vaomieran'ny Nobel Norveziana noho ny tolona tsy manao herisetra lavitr'ezaka nataony hisian'ny fampanjakana ny zon'olombelona fototra any Shina.
Fotoam-pifaliana lehibe ho an'ireo Shinoa tafiditra ho amin'io fironana io izao fotoana izao satria i Liu Xiaobo manko no misolo tena ny fahavononan'ny mpitolona ho amin'ny zon'olombelona hanovana am-pilaminana ny rafitra politika any Shina. Nosamborina ny lehilahy tamin'ny volana jona 2009 ary voaheloka higadra 11 taona voampanga ho “mandrisika ny hanakorontanana ny fahefam-panjakana” taorian'ny namoahana ny Sata 08, volavolam-panitsiana ny Lalampanorenana.
Ny nahazo loka Nobel fandriampahalemana any am-pigadrana
Nambaran'ny [zh] fitondrana Shinoa, anefa, ho setrin'ny fanapahan-kevitry ny vaomieran'ny Nobel fa Jiolahy nomelohin'ny fitsarana Shinoa i Liu ary mifanohitra amin'ny tanjon'ny fanomezana loka Nobel momba ny fandriampahalemana io fanapahan-kevitry ny vaomiera io.
Ny tweet[sioka] iray avy amin'i Akiranns angamba to valinteny mety indrindra amin'ny fanambaran'ny mpitondra tenin'ny fitondrana Shinoa:
Fantatrao ve iza moa no nahazo loka Nobel fandriampahalemana farany nefa mbola tany am-ponja tamin'izany fotoana izany?Carl von Ossietzky. Ary iza no mpitondra tao amin'ny fireneny tamin'izany? Hitler.
Mpiserasera nosamborina fa nikarakara fiaraha-misakafo
Ary ho fanamarinana ny filazan'ny Akiranns amin'ny fampifandraisana ny zava-niainan'ireo nahazo ny loka Nobel momba ny fandriampahalemana ireo dia nisafidy ny handrava ny fiaraha-misakafo tampotampoka nataon'ny mpiserasera ho fankalazana ity andro iray toa zato ity tany Shanghai sy tany Beijing ny polisy. Mitatitra avy amin'ny fiaraha-misakafo iray ao amin'ny Twitter i Hanlu1911:
Nofoanana ny fiaraha-misakafo sy fiaraha-manala hetaheta teto Shanghai. Noho ny fanahiana amin'ny mety hisian'i Shi Feike sy ry Soavalim-potaka an'ahitra (mpiserasera) hafa izay mety ho nalain'ny polisy. Mitondra saritapaka maro nalaina avy tamin'ny famahanam-bolongana bitika Sina.com ny manamboninahitra polisy. Mety hisy soavalim-potaka an'ahitra tanora iray ho fantatra amin'ny alalan'io fomba io. Efa mihaodihaody sy manara-maso manodidina ny kianja moa amin'izao fotoana izao ny polisy sy ny mpitsikilo.
Nahamarika farafahavitsiny mpiserasera Shinoa 8 nalain'ny polisy tao Dongcheng any Beijing i Teng Biao:
i Wang Lihong sy i Tiantian izao no vao azon'ny polisin'ny distrikan'i Dongcheng nalefany tao amin'ny kaomisarian'i Jinshan. “Ampolony no voaompa sy nosamborina”. Ah Er, Xiaolu sy i Mpivaro-kena nalefa tany amin'ny kaomisarian'i Heping. Xu Zhiyong, He Yang, @pengmomo ary ny hafa ihany koa dia lasan'ny polisy avokoa. Tsy mbola nanomboka akory ny fiaraha-misakafo dia saiky voasambotra avokoa izy rehetra. Mitandrema amin'izany.
Ireo mpisioka an-tserasera (Twitterers) izay nalefa ho any amin'ny Kaomisarià noho ny fankalazana ny fahazoana ny lokan'ny fandriamphalemana dia ry @wlh8964 @pengmomo @leewua @heyang519 @zhiyongxu @tufuwugan @xiaolu8964 @renjiaqi sy ny sisa. Mariho tsara izay
Ankoatra ny fisamborana dia miasa mafy ihany koa ny milina fampielazankevitra mba tsy hielezan'ny vaovao any amin'ny sarambambem-bahoaka amin'ny alalan'ny fametrahana sivana feno amin'ny aterineto.
Voalohany, nikatona avokoa androany ny vavahadin-tserasera namoaka vaovao manokana momba ny loka Nobel, ka tafiditra ao ihany koa ny lohateny misongadina avy amin'ny 163.com, Sohu.com, Tencent ary Sina.com.
Faharoa, ny voambolana Shinoa hoe “Loka Nobel” (諾貝爾) sy “Loka fandriampahalemana” (和平獎) dia lasa tsy mety ikarohana amin'ny lohamilina fampiasan'ny maro.
Fahatelo, vantany vao vita ny fanambarana, dia tsy mety nalefa twitter ny hafatra tamin'ny alalan'ny finday, araka ny tatitr'i @haojinsong, ny voambolana mety hanaitaitra misy hoe “Liu Xiaobo” (劉曉波).
Fomba fanehoana niforona
Na dia eo aza ny fepetran'ny fanakanana rehetra dia mbola nipariaka nanerana ny aterineto Shinoa ihany ny resaka. Ohatra, ao amin'ny famahanam-bolongana bitika Sina, dia mampiasa sary sy ny teny anglisy ny mpamaham-bolongana hialana amin'ny sivana. SongLingge#2 ohatra namoaka ny sarin'i Liu Xiaobo ary nanoratra hoe:
Fizarantsary: ity tary ity dia mihamitovy hatrany hatrany amin'ny moanina Gandhi, izy io no moanina masina Shinoa izay vao nahazo ny loka Nobel momba ny fandriampahalemana.
Fan Zhixing, izay mpanangom-baovao dia nandrisika ny mpiara-miasa aminy handrakitra ny tantara vita androany:
Ry mpanangom-baovao mpiara-miasa, eo ambany fifehezanao ny vata-marobokotrao. Ahoana ny handraketanao ny androany? Rehefa voatsiahy indray any aoriana any ny androany dia mba hitantsika ny hazavana sy ny aloka mifampitaratra amin'ny tsirairay avy.
Huang Yangda (lahatsoratra efa voavono):
Re tamin'ny alalan'ny fiampitan-teny, Shinoa hoe ilay zalahy nahazo ny lokan'ny fandriampahalemana, saingy tsy mpikambana ao amin'ny antoko izy! Satria efa noesorina taminy ny zo politikany. Adinoko ny anarany, tsy haiko ny fomba fanoratra azy.
Chongtou Yip milaza indray ny vaovao amin'ny alalan'ny fanoharana:
Indray andro, hono, nisy raim-pianakaviana mahery setra sy tsy mba misaina izay mamono sy managadra ny zanany lahy ao an'efitrano. Nefa ny mpianatra sy ny mpampianatra rehetra any an-tsekoly dia midera ity zanany lahy ity avokoa. Midera ilay zanaka avokoa ihany koa ny mpifanolo-bodirindrina rehetra. Ahoana no tsy hahitan'ilay ray ny helony amin'izany?
廖偉棠 indray namoaka poezia ho an'ny gadra politika rehetra:
Ho an'ilay gadra (116°46′E, 39°92′N): Tsy azo melohina ny heloka tsy misy antony. Te-hanafoana anao izy amin'ny fanambarana rehetra. Ary manao anao ho Andriamatoa tsy misy. nalainy ny rivotra avy amin'ny reniranon'i Yongding ary nampangatsiahiny eo amin'ny taolana fotsy. Izay navadiny ho fefy vin'ny varavarankely sy rojo mamatotra ny kitro. Tsy ho fantatr'izy ireo mandrakizay fa afa-mandraraka ranomainty eo amin'ny taolana fotsy ianao. Ary dia handoko ny setroky nofy lohataonan'ny mpanonofy.